Mba mieritreritra ve nareo e ?? Asa tsara io koa hoe hiala aho, hiala - 1er Pas - Transformez ce rêve en realité
1er Pas – Transformez ce rêve en realité
Mba mieritreritra ve nareo e ?? Asa tsara io koa hoe hiala aho, hiala
avril 26, 2020	0	Par angelo.r
Firy amintsika manaraka tsy tapaka Blog Volagno Aminazy io no efa n-traitern’ol anzan hoe: Enao ve adal’eh!!! Mety ho ray aman-dreny io, mety ho havana io, mety ho mpiara-miasa io sns… Ny vie indépendant dia tsy nataonao hoan’olon-drehetra fa raha ny olon-drehetra no samy directeur ny tenany dia tsy misy intsony ny atao hoe piasa. Ka noho izany dia samy manana ny heviny ny tsirairay amin’ny resaka asa. Ao ny mieritreritra fa ny miasa amin’ny orin’asa no mety aminy. Ao koa ny sasany leo an’ity manenjika fidirana lava ty de aleony mamorona fidiram-bola hoazy mba ahafahany m-gerer ny fiainany tsara.
Ka ny cas-ko 3 taona lasa izay dia be dia be no nieritreritra ah fa adala fa satria niala tamin’ny orin’asa lehibe iray teto andrenivohitra aho mba hanorona ny orin’asako manokana. Tsoriko aloha fa tsara karama io orin’asa io. En plus koa ny tena tamin’izany mahatratra prime maximum isam-bolana izany hoe 6 chiffres ar ankoatran’ny salaire de base zay efa ça va! De tena la vie etait belle! Nanomboka tamin’ny 2012 nidirako tao azakazan-tsoavaly ny lien (Netlinking) référencement SEO ny drafitra isan’andro tao. Ny partage moa efa voajanahary amin’ny tena dia mora kely mahita an’izany lien izany fa hoan’ny ekipa tamin’izany efa mila itomany vao mahazo lien. Bref, tsara karama tokoa ah fa na ny tenako aza dia efa mba nieritreritra ihany t@ 3 après nialana an’io orin’asa io tena adala ah, iny karama tsara iny dia nialana sns.
Te realiser ny rêve-ko nahatonga ah niala
Itsika rehetra samy manana ny rêve-ny fa ankavitsiana no manana fahasahiana anatanteraka izany. Fa ny ahy aloha dia nataoko na dia nanao chute libre aza aho. Tsy mora tamiko no niaina sy nanatanteraka izany rêve-ko izany kanefa dia efa tanteraka izy izao ary miaina izany isan’andro aho dia ny »Bonheur ». Oui nitady fahasambarana mihitsy natonga ahy niala fa satria ny fahasambarana amiko an dia: indépendant financièrement, miasa amin’izay ora sy fotoana tiako hiasana na koa toerana , manao izay zavatra tiako atao sy ny sakafo tiako hoanina, m-partage amin’olona ny talenta-ko mba hanampiako ny hafa hanatanteraka ny rêve-ny ihany koa, tsy baikobaikoin’ny tompon’ny orin’asa na ny chef, miaina milamina sy manampy ny fianakaviana ary ny mpiara-belona amiko, ary farany izay efa niriko dia ny vie de luxe. Izany rehetra izany dia efa niainako foana, dia mbola ianako ary hianako foana foana. Dia mba ahafahako miaina izany zavatra rehetra izany dia tsy maintsy nataoko izay ah indépendant ah @ resa-bola. Dia nikarakara taratasy ny orin’asako aho mba ha reglo ah eo anivon’ny fanjakana.
3 taona lasa: Elah ve adala! Ny asa tsara io ka hoe hiala hiala
Raha vô misy mba te hanatanteraka ny rêve ny olona de presque io foana ny mahazo.
– Dada tsy hianatra any @ Université zany aho fa tonga de hiasa. De inona ny valiny?
– Leo ny miasa amin’ny société ah ka handeha hanangana ny ahy. De ny impossible presque valin-teny azonao.
Ny olona tsirairay avy samy manana ny rêve-ny ka raha ny rêve-nao io ilanao toky amin’ny hafa dia ny ankabeazan’ny olona manakivy anao fa misy kosa nefa mankahery an.
Be dia be no mety fandresen-dahatra ataon’olona aminao mba hisakanana anao Fa raha, ny lojikam-piainana no jerena de be dia be ny mino satria presque zava-misy @ zao fiainana izao no andresen’olona lahatra anao.
Fika hanatanterahana ny rêve
Tsisy afa tsy ny fanankinana ny fiainana amin’andriamanitra ihany io. Ary izao rehetra izao dia an’andriamanitra ka afaka omeny anao rehefa mino tanteraka ny fisiany eo amin’ny fiainanao.
Ny antsika koa mantsy rehefa mivavaka dia mangataka foana fa tsy mba mahay misaotra. Misy an-dalana soratra masina izay tsy tadidiko fa rehefa misy oiziz ny zavatra angatahianao dia misaora sahady fa azonao izany. Ny tokony tonga dia misaotra no atao fa tsy mbola mangataka foana.
Mitadiava coach, mentor, na koa olona afaka manampy anao amin’ny fanatanterahana ny rêve-nao. Fa heureusement ny ray aman-dreniko sy ny ray tam-po amiko manohan’ahy @ zay ataoko ko rehetra dia nitohy foana ny lalako ary efa in-3 aho no niala orin’asa dia tsy nampaninon’ahy akory izany.
Bonne chance amin’ny fanatanterahana ny rêve
Monde de business = Monde de requin
Peur de réussir, peur de critiquer…! Fika 2 handresena an’izany